हाम्रो रैथाने कागज “नेपाली कागज” | Canadian Reporters
हाम्रो रैथाने कागज “नेपाली कागज”
Posted on September 5, 2018 , updated on February 15, 2020 by क्यानेडियन रिपोटर्स
कागज एउटा पातलो पदार्थ हो जुन कुनै पनि कुरा लेख्न तथा प्रिन्ट गर्नमा प्रयोग गरिन्छ । कागज मुख्य रुपमा लेख्न र छपाइ गर्नका लागि उपयुक्त छ । मानव सभ्यताको विकासमा कागजको ठूलो योगदान छ ।
अझै पनि हामी कुनै सरकारी कार्यालयमा गयो भने डिजिटल संकल्प धेरै पछि रहेको देखिन्छ । अझै पनि सरकारी कार्यालयको सबै आधिकारिक कागजपत्रहरु नेपाली कागजमा हातले नै लेखिन्छ ।
स्वीसको जिवनशैली बुटिकदेखि नागोगा बाट न्यूयोर्कसम्म इन्द्रेणी ह्यूड लोक्ता कागजलाई आजसम्म पनि सजावटको सामान, नोटबुक, वालपेपर, कार्ड, ल्याप्म र कपडाबनाउनका लागि समेत पहिलो स्थानमा नै राखिएको छ ।
नेपालमा अझैसम्म नेपाली कागजको महत्वलाई कुनै पनि प्राविधिक प्रयोजनले पछि पार्न सकेको छैन । नेपाली भूमिमा तयार पारिने उक्त कागजको मान्यता सरकारी काममा मात्र नभई अन्य थुप्रै कार्यहरुमा पनि प्रयोग गरिन्छ ।
अन्य कागजभन्दा नेपाली कागजको बेग्लै महत्व रहेको छ । नेपालमा जापानिज र नेपाली कागज प्रयोग हुन्छ । तर जति सुकै गुणस्तरीय कागज आएपनि नेपाली कागजको महत्व बेग्लै छ । १५ वर्षअघि नेपालमा जापानिज कागजको प्रयोग थिएन । पहिले लोक्ताले मात्र बनेको नेपाली कागजको प्रयोग गरिन्थ्यो । जुन जीवनकाल भर सुरक्षित रहन्थ्यो ।
तर अहिले नेपाली कागजमा पहिलेको जस्तो गुणस्तर नभएको, सस्तो र मिसावट भएको कागज उत्पादन हुने र १० देख १५ वर्षपछि किराले खान थाल्छ । बाबियो मिसाएको कागज किराले खान्छ । पहिला लोक्ताले मात्र बनाएको कागजहरु जीवनकाल चल्ने, अक्षरहरु पानीबाट नफुल्ने, नच्यातिने र किराले पनि खाँदैनथियो ।
नेपाली कागज केही हदसम्म लोप भएर पनि गइरहेको छ । “पहिले जति नेपाली कागजको प्रयोग गरिन्थ्यो हालका दिनहरुमा त्यति प्रयोग हुँदैन किनभने अहिले नेपाली कागजको गुणस्तर पनि खस्कँदै गएको छ । अहिले पहिले जस्तो शुद्व लोक्ताको मात्र कागज आउँदैन ।”
अहिले आएका विभिन्न गुणस्तरहिन र सस्तो कागजहरुले पनि नेपाली कागजको बजार खस्किएको छ । अहिले हाम्रा उधमीले केरा, घाँस, अलैचीको बोक्राहरुबाट कागज बनाउने गरेका छन् । जुन रैथाने नेपाली कागजभन्दा सस्तो हुन्छ । मानिसहरुले सस्तो कागजको प्रयोग गर्दै जाँदा रैथाने नेपाली कागज महंगो हुनगएर कम प्रयोग गर्दै आएको स्थ्तिी छ ।
अन्य कागजको तुलनामा रैथाने नेपाली कागजको मूल्य धेरै नै छ । लोक्ताले बनेको रैथाने कागजको ५ हजार मूल्य पर्न जाँदा त्यही केराले बनेको कागज १५ सयमा नै खरिद गर्न सकिन्छ । कमसल र डुप्लिकेट नेपाली कागज ५ रुपैयाँसम्म पनि दिइरहेको हुन्छ । तर सक्कली नेपाली कागजको मूल्य कम्तीमा पनि ७ रुपैयाँको दरले बिक्री हुन्छ ।
नेपाली कागजको स्वदेशी उत्पादनले धेरैलाई फाइदा भएको छ । कतिपयले देशमा नै रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । नेपाली कागज विदेशमा पनि पठाइन्छ ।
अहिले नेपाली कागज स्वदेशमा भन्दा धेरै विदेशमा बिक्री हुन्छ । यसो हुँदा विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिरहेको छ र साथै नेपाली उत्पादनको राम्रो बजार स्थापना भइरहेको छ ।
“सरकारले यसको प्रयोग बढाउनुपर्छ ताकी अबका पुस्ताहरुले पनि नेपाली कागजको महत्व बुझुन् र त्यसको प्रयोगलाई निरन्तरता दिउन् । बजारमा आउने कमसल, सस्तो र मिसावटी कागजको बेचबिखनमा स्तर निर्धारण गरिनु जरुरि बनेको छ ।
कसरी बनाइन्छ ?
नेपाली कागज घाँसपातले बनाइन्छ । नेपालमा पाइने बाबियो नामको घाँस र लोक्तालाई मिसाई कागज तयार पार्ने घोल तयार पारिन्छ । लोक्ता एक प्रकारको घाँस हो जुन समुन्द्र सतहदेखि ४ हजार फिटमाथिको उचाईमा मात्र पाइन्छ । यी घाँसको रुखको बोक्रा तासेर ल्याइन्छ । ती बोक्राबाट बाहिरी भाग र भित्रि भागको काठ फाली बीचको गुदि मात्र प्रयोजनमा ल्याइन्छ ।
यी दुई घाँसलाई मिसाई त्यसमा विभिन्न केमिकलहरु हाली पकाइन्छ । यसबाट बनेको घोलबाट कागज तयार पारिन्छ । घोल तयार पारिसकेपछि उक्त घोललाई कागज बनाउनका लागि फ्रेममा सेट गरिन्छ । यसरी सेट गर्दा कति ग्रामको कागज बनाउने हो त्यसै अनुरुपले जगको स्केल अनुसार पानीमा घोल्दैफ्रेममा सेट गरिन्छ । र त्यसलाई उचित तापक्रममा राखि सुकाइन्छ । यसरी नेपाली कागज तयार हुन्छ ।
कुन—कुन कुरामा प्रयोग गरिन्छ ?
नेपाली कागजको महत्व हाम्रो देशमा सरकारी कार्यालयहरुको कागजपत्र लेख्नमा प्रयोग गरिन्छ । अझै पनि जन्म दर्ता बनाउनका लागि नेपाली कागजको प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै नागरिकता, आधिकारिक कागजपत्र इत्यादि बनाउनका लागि नेपाली कागजको महत्व धेरै नै छ । सरकारी काम बाहेक भिजिटिङ कार्ड, विवाहको कार्ड, प्रमाणपत्र, वेद लेख्नमा नेपाली कागजको प्रयोग गरिन्छ ।
देशमा मात्र नभई विदेशमा पनि नेपाली कागजको प्रयोग बृहत मात्रामा गरिन्छ । चीनमा छाता बनाउनका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ । कतिपय देशको पैसा बनाउनमा पनि कच्चा पदार्थको रुपमा नेपाली कागजको प्रयोग गरिन्छ । सजावटका सामनहरु बनाउनमा पनि नेपाी कागजको प्रयोग गरिन्छ । रेकर्ड फाइल बनाउनमा पनि नेपाली कागजको प्रयोग गरिएको हुन्छ । नेपाली कागजलाई क्राफ्ट पेपरले बेरेर रेकर्ड फाइल तयार पारिन्छ ।
कति ग्रामको कागज कुन कामका लागि प्रयोग गरिन्छ ?
नेपाली कागज ग्रामको हिसाबले बनाइन्छ र त्यसै अनुसारले बेचिन्छ । नेपाली कागज ४ ग्रामबाट बनाउन शुरु गरिन्छ । ५ ग्रामको कागजबाट बाटेको धुप बनाइन्छ भने १० ग्रामको कागजबाट सजावटको सामनहरु जस्तै ल्याम्प, वालपेपर, चित्र इत्यादिहरु तयार पारिन्छ । त्यस्तै १५ ग्रामको कागज लेख्नमा प्रयोग गरिन्छ । १८ देखि २५ ग्रामसम्मको कागज कम्प्यूटरमा राख्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । जुन ‘ए—फोर’ पेपर जत्रो हुन्छ ।
त्यसै गरी ३० ग्रामदेखि ६० ग्रामसम्मको कागजमा जन्म दर्ता तथा प्रमाणपत्रहरु तयार पारिन्छ । भिजिटिङ कार्ड, बनाउनका लागि ८० ग्रामको कागजको आवश्यकता पर्छ । विशेष किसिमको प्रमाणपत्रहरु बनाउनमा पनि ८० ग्रामको कागजको प्रयोग गरिन्छ ।
गति लिनै नसक्ने ! कहाँ चुक्यो सरकार ?